Wamkelekile kwiKaskazi House, intle, yangoku, indawo yokuhlala yamanzi yamaxesha amane kwiLake iMazinaw, kufutshane neBon Echo Park edumileyo. Kwitheku elithe cwaka, elijongene noMzantsi-Ntshona, iindwendwe ziqinisekiswa ukutshona kwelanga okuhle kunye nendawo ethambekileyo, enesanti yonxweme. Embindini weLand O' Lakes, kuninzi ekufuneka kujongwe kukwenza ukuba ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela izibini, iintsapho kunye namaqela ajonge iholide yendlu ethe cwaka okanye i-adventure esebenzayo ngokuloba, ukukhwela isikhephe, iATV/Imobile yekhephu, ukutyibilika, ukukhwela intaba, ukukhwela ikhephu. kunye nemidlalo yasemanzini.
Ipropathi inamagumbi okulala amane (ama-5 kwiinyanga ezishushu), amagumbi okuhlambela amathathu agcweleyo, iindawo zokutshisa igesi ezimbini kunye nezinto ezininzi ezicingayo.
Ikhitshi lembono evulekileyo ilayishwe ngokupheleleyo kwaye inokufikelela ngokuthe ngqo kwinqanaba eliphezulu-indawo enkulu yokuzonwabisa eneGesi yoMlilo kunye neBBQ. Igumbi lokulala eliyinkosi linendawo yokumema yeofisi enika umbono omangalisayo wechibi ukutsala ibhedi kunye nexesha lokufunda elizolileyo.
Inqanaba lokuhamba elisezantsi linendawo yomlilo, igumbi leendaba, ibha emanzi, imidlalo, izixhobo zokuzilolonga, itafile yephuli kunye nendawo yokubeka igalufa esandula ukongezwa! Lo mmandla ukwakhokelela ngokuthe ngqo kwidesika esezantsi, ibhafu eshushu kunye nendlela yokuya kumlilo.
Ukufikelela ngasemanzini liphupha. Unxweme lunesanti, ezantsi engenalukhula kunye nokuhla ngokuthe ngcembe ngaphezu kweenyawo zokuqala ezingama-50-60 ukuya kumanzi anzulu, alungele abantwana abancinci okanye ukuhlala kufutshane. Ipropati inokufikelela kwisanti kwaye akukho zinyuko zifunekayo ukuze ungene emanzini. Nangona ukufikelela lula kwicandelo elinye, izitepsi ezimbalwa ziyafumaneka. Umda wamanzi unedokhi e-1 ende kunye nomngangatho kumda wamanzi wokuhlala kunye nokuphumla.
Ukusukela ngoMeyi ukuya ku-Okthobha, unokuxhamla kwi-boathouse eguqulweyo njengegumbi lokulala lesi-5. Oku kubonelela nge-oasis emphethweni wamanzi, igcwele ibhedi yokumkanikazi kwindawo ephakamileyo eyenziwe isiko, i-air conditioning, indawo enkulu evulekileyo yeyoga kunye nokusonga kwidesika yabucala. Oku kunikezelwa ngeendleko ezongezelelweyo zonyaka. Buza nathi.
Le ndawo ibonelela ngobutofotofo obutofotofo kunye nokubaleka esixekweni, awuyi kudana!
Ngaphantsi kwemizuzu engama-20 ukuya eNorthbrook, ukunika ukufikelela kwizinto ezinjengokutya, iLCBO, iVenkile yeBeer, iButcher Shop, kunye nevenkile yehardware.
Imizuzu eli-15 uqhuba ukuya eBon Echo Provincial Park ukufikelela kwiindlela ezibanzi zokuhamba intaba, okanye ukukhwela isikhephe nje ukunqumla ibheyi!
I-Kingston ingaphakathi kweeyure ze-1.5, i-Ottawa ingaphakathi kweeyure ze-2, i-Toronto ingaphakathi kwe-2.5 / 3 iiyure.
Although orignally from Peterborough, ON, our family loves our second home in the Land O' Lakes/Bon Echo area. It offers so many active adventure opportunities but also provides the restorative tranquility that our busy family needs!
Silawula iholide yakho njengosapho kwaye sihlala sifumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile kwaye ukuba kuyimfuneko, ngokobuqu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cloyne